Ikhaya » Izindaba Zamuva » zezindiza » IATA yethula isitifiketi esisha sebhethri se-lithium
Airlines • Airport • Izindaba Zezinhlangano • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba Ezintsha zaseHong Kong • Izindaba zaseNetherlands • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba
ICentre of Excellence for Independent Validators (CEIV) Lithium Battery yethulwe yi-IATA ukwenza ngcono ukuphathwa nokuthuthwa okuphephile kwamabhethri e-lithium kulo lonke uhla lokuphakelwa.
Amabhethri e-lithium ayimithombo yamandla ebucayi yezimpahla eziningi zabathengi esithembele kuzo sonke.
Kubalulekile ukuthi amabhethri e-lithium angathunyelwa ngokuphepha ngomoya kungaba nemikhiqizo eqediwe noma njengezakhi zamaketanga wokuphakelwa komhlaba.
I-CEVA Logistics isitifiketi sokuqala se-CEIV Lithium Battery sokusebenza kwayo eHong Kong International Airport naseAmsterdam Schiphol Airport.
The Inhlangano Yezindiza Yezindiza Yomhlaba Wonke (IATA) isungule isitifiketi esisha semboni— iCentre of Excellence for Independent Validators (CEIV) Lithium Battery - ukwenza ngcono ukuphathwa nokuthuthwa okuphephile kwamabhethri e-lithium kulo lonke uhla lokuphakelwa.
“Amabhethri e-lithium angumthombo wamandla obucayi wezimpahla eziningi zabathengi esithembele kuzo sonke. Futhi kubalulekile ukuthi sikwazi ukuwathumela ngokuphepha emoyeni kungaba nemikhiqizo eqediwe noma njengezinto kumaketanga wokuphakelwa komhlaba. Kungakho sithuthukise isitifiketi se-CEIV Lithium Battery. Inikeza abathumeli nezindiza izindiza ukuthi izinkampani eziqinisekisiwe zezokusebenza zisebenza emazingeni aphezulu okuphepha nokuvikeleka lapho kuthunyelwa amabhethri e-lithium, ”kusho uWillie Walsh, IATAUMqondisi Jikelele kanye ne-CEO.
Ukuthunyelwa kwamabhethri e-lithium (kukodwa noma ngemikhiqizo eqediwe) kufanele kuhambisane nezindinganiso zokuphepha zomhlaba ezisungulwe kahle zokuthi zenziwa kanjani, zivivinywa kanjani, zahlanganiswa kanjani, zamakwa, zafakwa amalebula futhi zabhalwa kanjani. Lezi zidingo ziyinto esemqoka ye-IATA Lithium Battery Shipping Regulations (LBSR) kanye ne-IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) ehlanganisa okokulawula nokusebenza kokuvela kochwepheshe bezimboni nohulumeni.
I-CEVA Logistics isitifiketi sokuqala se-CEIV Lithium Battery sokusebenza kwayo e Isikhumulo sezindiza i-Hong Kong International futhi ku I-Amsterdam Schiphol Airport, kulandela isikhathi esiningi sokuhlola.
“Sihalalisela i-CEVA ngokuba yinkampani yokuqala yezimpahla ukufeza isitifiketi se-CEIV Lithium Battery. Kusuka kubaphathi bezimpahla, izinkampani ezithwala phansi, abadlulisa izimpahla kanye nezinkampani zemikhumbi, ababambiqhaza abengeziwe kulayini wamanani abamba iqhaza ku-CEIV Lithium Battery, kuzoba namandla futhi kuphumelele kakhulu embonini. Ekugcineni, sonke sifuna ukubona inethiwekhi yemizila yokuhweba ye-CEIV Lithium Battery enabahlanganyeli abaqinisekisiwe lapho bevela khona, lapho beya khona nasezindaweni zokuhamba, ”kusho uWalsh.
“Amakhasimende ethu ezimoto, ezempilo kanye nobuchwepheshe ayalithokozela ikhono lethu lokuletha izixazululo zokuphendula ngaphandle komthungo kungakhathalekile ukuthi ulibangisephi noma uhlobo lwezimpahla, njengamabhethri e-lithium-ion. Isipiliyoni sethu sokuhambisa amabhethri anhlobonhlobo asenze umlingani ofanele ne-IATA ekuhloleni isitifiketi sabo esisha se-CEIV. I-IATA iyaqhubeka nokuhola phambili ekunikezeni amazinga, imithethonqubo kanye nemihlahlandlela yokwenza ngcono ikhwalithi kanye nokuphepha embonini yezokuthutha emoyeni. Lesi sitifiketi esisha sinika amakhasimende ukuzethemba okukhulu ngokwengeziwe emandleni ethu okuthutha ngokuphepha nangokwethembeka amabhethri awo e-lithium-ion, ”uPeter Penseel, COO wezimpahla zomoya ze-CEVA Logistics.
IFlorida iguliswa kakhulu, iHawaii yi-US ebulala kakhulu ...
Izindiza ZaseBritish Izindiza ezisuka eLondon Heathrow ziye eSaint ...